२६ अर्ब डलर लाभांस बाँड्दै समसुङ, ३ महिनामै १० अर्ब डलर कमायो !!! | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
२६ अर्ब डलर लाभांस बाँड्दै समसुङ, ३ महिनामै १० अर्ब डलर कमायो !!!
काठमाडौं । सामसुङले अहिलेसम्मकै ठूलो त्रैमासिक नाफा सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीले जुलाई देखि सेप्टेम्बर सम्मको अवधिमा नाफा ११.२ ट्रिलियन वन अर्थात १० अर्ब अमेरिकी डलर कायम भएको छ । यो नाफा गत वर्षको समान अवधिको तुलनामा तेब्बर हो । यसमा मेमोरी चिप्सको उच्च मूल्य र स्मार्टफोनको बिक्रीमा आएको सुधारको महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहा गरेको छ ।
असाधारण संकटको अवस्था आएको बताउदै फर्मबाट प्रमुख कार्यकारी वन ओह ह्युनले राजिनामा दिएको केही सातापछिको अवस्थामा सामसुङको यो नाफा सार्वजनिक भएको हो ।
कम्पनीको यो नाफा विगतमा गरिएको निर्णय र लगानीको प्रतिफल मात्रै भएको वनले बताए । घुस र भ्रष्टाचारका कारण आफूलाई दिएको पाँच वर्षे जेल सजायको बिरुद्धमा सामसुङ ग्रुपका उत्तराधिकारी ली जे योङले अपिल गरेपछिको समयमा उनको यो राजिनामा आएको हो ।
सामसुङ इलेक्ट्रोनिक्सले पछिल्लो त्रैमासिक नतिजालाई समग्रमा विष्फोटक भूमिका भएको बताएको छ । विश्वकै ठूलो मेमोरी चिप र स्मार्टफोनको निर्माताले आफ्नो उत्पादनप्रतिको मजबुत मागले निरन्तरता पाउने र यसले कीर्तिमानी वार्षिक नाफा हुने जनाएको छ ।
कम्पनीले आगामी ३ वर्षको अवधिमा सेयर होल्डरहरुलाई २६ अर्ब डलरको हाराहारीमा लाभांश वितरण गर्ने भएको छ । सामसङको आम्दानीमा मेमोरी चिप्सको प्रमुख भूमिका रहदै आएको छ । यसमा नयाँ नोट-८ स्मार्टफोनले थप सहयोग गरेको छ । यो फोनको प्रिअर्ड अन्य कुनैपनि फोनको तुलनामा उच्च कायम भएको थियो । – एजेन्सी